Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao na manana fanontaniana momba ny politikam-pahafaham-ponao, azafady mifandraisa aminay. amin'ny Martech Zone, ny tsiambaratelon'ny mpitsidika anay dia zava-dehibe indrindra aminay. Ity antontan-taratasy politika momba ny tsiambaratelo ity dia manoritra ireo karazana fampahalalana momba anao manokana izay raisina sy angonin'i Martech Zone ary ny fampiasana azy.
Toy ny tranonkala maro hafa, Martech Zone mampiasa fisie log. Ny fampahalalana ao anatin'ny rakitra log dia misy ny adiresy protokol internet (IP), ny karazana browser, Internet Service Provider (ISP), ny daty / ny fotoana, ny pejy fanondroana / fivoahana, ary ny isan'ny tsindry handinihana ireo fironana, hitantanana ilay tranonkala, hanarahana ny hetsiky ny mpampiasa manodidina ny tranokala, ary manangona fampahalalana momba ny demografika. Ny adiresy IP, ary ny fampahalalana hafa toa izany dia tsy mifandray amin'ny fampahalalana izay azo fantarina manokana.
Martech Zone dia mampiasa cookies mba hitahirizana vaovao momba ny safidin'ny mpitsidika, handraketana ny mombamomba ny mpampiasa amin'ny pejy izay idiran'ny mpampiasa na tsidihiny, ampanjifaina ny atiny amin'ny pejin-tranonkala miorina amin'ny karazana mpitsidika mpitsidika na fampahalalana hafa izay alefan'ilay mpitsidika amin'ny alàlan'ny tranokalan'izy ireo.
Google, amin'ny maha mpivarotra antoko fahatelo azy, dia mampiasa cookies handefasana doka Martech Zone.
Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia ahafahany mandefa doka amin'ny mpampiasa mifototra amin'ny fitsidihan'izy ireo Martech Zone ary tranokala hafa amin'ny Internet.
Ireo mpampiasa dia afaka miala amin'ny fampiasana ny cookie DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny doka sy atiny Google politika momba ny fiainana manokana amin'ny tamba-jotra
Ny sasany amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra dia mety mampiasa cookies sy jiro web amin'ny tranokalanay. Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra dia misy ny Google Adsense, Commission Junction, Clickbank, Amazon ary ireo mpiara-miasa sy mpanohana hafa.
Martech Zone tsy manana fidirana na mifehy ireo cookies ireo izay ampiasain'ny mpanao doka fahatelo.
Tokony hijery ny politika manokana momba ny fiainana manokana ataon'ireto mpizara doka fahatelo ireto ianao raha mila fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba fanaony ary koa ny torolàlana momba ny fomba hialana amin'ireo fomba fanao sasany. Martech ZoneNy politika momba ny tsiambaratelo dia tsy mihatra ary tsy afaka mifehy ny hetsika ataon'ny mpanao dokam-barotra hafa na tranokala toy izany izahay.